Fanafihana mitam-piadiana : Jiolahy miisa 14 tra-tehaky ny zandary -
AccueilSongandinaFanafihana mitam-piadiana : Jiolahy miisa 14 tra-tehaky ny zandary
Fanafihana mitam-piadiana : Jiolahy miisa 14 tra-tehaky ny zandary
Vao niandoha ny taona, dia efa nitondra vokatra tsara ho amin’ny fampanjakana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Jiolahy miisa 14, nivondrona tao anatina tambazotra iray efa tena matanjaka, ary mpanao fanafihana mitam-piadiana eto Antananarivo sy Vakinankaratra, no ravan’izy ireo tsikelikely nanomboka ny zoma 22 desambra 2017 lasa teo. Teto Antananarivo sy tany Ambatolampy no nanaovana ny fisamborana, ary niainga tamin’ny fahatratrarana ny iray tamin’izy ireo no nihitaran’ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo namany. “Ny fitoriana efa nipetraka nanomboka ny taona 2016 sy ny fampilazam-baovao azonay ny volana desambra teo no nahafahana nisambotra ireto andian-jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana ireto”, hoy ny nambaran’ny Chef d’Escadron Tojo Raoilijaona, kaomanda kaompania an’Antananarivo renivohitra. Nahitana vehivavy iray moa tamin’ireo andian-jiolahy ireo, ary raha ny voalaza, dia miisa 26, izay mbola ahitana vehivavy roa hafa izy ireo no ao anatin’ity fikambanan-jiolahy ity, saingy mbola mitohy ny fitadiavana ireo ambiny. Nahatrarana basim-borona roa, basy vita gasy iray, basy “revolver” iray, ary bala maromaro tany amin’ireto olon-dratsy ireto tamin’ny fotoana nanaovana ny fisamborana.
Trangam-panafihana miisa 21
Ny fanadihadiana lalina nataon’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena ihany koa no mbola nahafantarana fa efa nahatratra 21 isa, ny trangam-panafihana mitam-piadiana notontosain’ireto andian-jiolahy efa nifampitadiavana ireto, tao anatin’ny herintaona. Teto amin’ny faritr’Analamanga avokoa no nisehoan’ny 15 tamin’ireo asa ratsy ireo, raha toa ka nisy tranga miisa 06 tany amin’ny faritr’i Vakinankaratra iny. Efa nametrahan’ireto andian-jiolahy ireto ny asa tanany ihany koa ny teny amin’ny faritr’Itaosy, Fenoarivo, Andoharanofotsy, Alasora, Ambatofotsy . Efa nahatratra 88.996.000 Ar no totalim-bidin’ireo entana sarobidy voaroban’ireto farany tamin’ireo tokantrano sy ireo olona notafihany. olona iray kosa no fantatra fa namoy ny ainy vokatr’izay asa ratsy nataon’izy ireo izay. Raha ny nambaran’ity kaomanda kaompania an’Antananarivo renivohitra ity ihany, dia tsy mifidy hasiana ireo olon-dratsy ireo, fa dia petahan’izy ireo avokoa izay metimety amin’izy ireo. Mbola mandry andriran’antsy noho izany ireo mponina, indrindra fa ireo izay any amin’ny faritra efa voakasika, raha tsy voasambotra ireo jiolahy 12 ambiny mirenireny eny rehetra eny. Tao anatin’ny roa volana, dia tambazotran-jiolahy maro no efa ravan’ny zandary ary ny ankabeazan’izy ireo, dia tra-tehaka teo am-pikononkononana fanafihana mitam-piadiana avokoa. Ny fanampim-panazavana azo avy eo anivon’ity vondron-kery ity, izay nilaza fa ny fiofanana narahan’ireo zandary no isan’ny tena nanamora sy nampiakatra io vokatra io.